စစ်တွေမှာ သံဃာတစ်ပါးကို လက်နက်တွေနဲ့ ဖမ်းဆီးမိ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
စစ်တွေမှာ သံဃာတစ်ပါးကို လက်နက်တွေနဲ့ ဖမ်းဆီးမိ
RFA Burmese‘s photo.
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့မှာ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဦးဣန္ဒာစာရ ဆိုတဲ့ သံဃာတစ်ပါးကို လက်နက်တွေ၊ ကျည်ဆန်တွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ နဲ့အတူ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးမိခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီသံဃာတော်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ကနေ ဘူးသီးတောင်ကို သွားရောက် ဖို့ပြင် ဆင်နေစဉ် စစ်တွေ မလိခ အမြန်ရေယာဉ်ဆိပ်မှာ ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ထံကနေ ပစ်စတို သေနတ်တစ်လက်၊ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံး၊ ကျည်ဆံ ၂၆ တောင့်နဲ့ WY စာတန်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြား ၄၉၆၀၀ ပြား တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားမဝင် WY ပန်းရောင် စိတ်ကြွဆေးပြားတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာ ၃၀၀၀ နှုန်းရှိတဲ့အတွက် မနေ့က ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတန်ဖိုးဟာ ကာလ တန်ဖိုး ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့လည်း အစိုးရ လုံခြံရေးအရာရှိတွေ က ဆိုပါတယ်။
ဦးဣန္ဒာစာရရဲ့ သာသနာဝင်အမှတ်မှာ ၉/ညဥန(သ) ၀၀၀ ၈၃၈ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်ဇာတိဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ရသေ့တောင်နဲ့ ဘူးသီးတောင် အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတွေမှာ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဦးဣန္ဒာစာရဟာ မင်းပြားမြို့ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းမှာ အနေများပြီး လက်ရှိ သက်တော်မှာ ၃၈ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ဝါတော်မှာ ၁၈ ဝါ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က စစ်တွေမြို့ကို ရောက်ရှိပြီး စစ်တွေအလိုတော်ပြည့်ကျောင်းမှာ သီတင်း သုံးနေ ထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစစ်တွေ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းကနေ ဘူးသီးတောင်ကိုသွားဖို့ ထွက်ခွာစဉ် အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဖမ်းမခံရခင် ၂ ရက်အလိုက စစ်တွေမြို့ မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် ဒကာတစ်ယောက်က အဲဒီပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်ကို လာပေးသွား တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးဣန္ဒာစာရ က ထွက်ဆိုကြောင်း အာဏာပိုင်တွေ ဘက်ကပြော ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ဦးဣန္ဒာစာရကို ပုဒ်မ-၁၅/၁၉(က)၊ ၂၀(က)၊ ၂၁/၂၂(ခ) နဲ့ အာဏာ ပိုင်တွေက အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။
This entry was posted on January 27, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မကွေးပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ အား နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့မှ လူဝတ်လဲခိုင်း လိုက်ပြီ
A Review on Dr. Wakar Uddin’s Interview with RVision →